Intloko ye-Fashion-2016 - umklami unceda ukwenza ukhangeleliso olubonakalayo
Ababikezeli bezulu baxela ukuba ubusika 2015-2016 iya kuba yinto ebanda kakhulu kwiminyaka embalwa edlulayo. Ithemba elinjalo eliqhayisayo lenza bonke abafazi abafashisayo kunye nabaqulunqi befashini bazilungiselele ngokubanda kakhulu kwaye kufuneka bathenge isitya esitsha esifudumeleyo. Ngethamsanqa, i-gurus yefashini engenamsebenzi ayigqiba ukusimangalisa ngeengcamango zabo zokudala kwaye sele sele iqokelelele iqoqo lezinto ezihamba phambili zobusika. Funda malunga nokuhlaziywa kwamva kweebhokhwe zasebusika ezivela kwindlela yethu yokuphononongwa ngefashoni kunye neefoto.
Impahla yentloko yeFestile, ubusika 2016
Ngoko ke, abathandi bebhola ezifudumele kunye neengubo eziza kubusika ziya kuba yintoni okuyikhethayo. I-Fashionable iya kuba yintloko ye-retro isitayela, iinqana-brimmed-hrim, ii-hats zoboya, i-beanie-caps, i-kepi efudumele kunye ne-snacks. Njengoko ubona, abaqulunqi bazama kwaye banikezela i-assortment enkulu kuyo yonke imibala kunye nombala.
Iimodeli ezithandwa kakhulu zentsha ziya kukhishwa i-beanie-beanies. Cishe yonke ibhetri yokubheja kumatshini amnyama e-monochrome. Ngaphandle kweso sihloko esivela kuTommy Hilfiger, esinikezela inguqu ebomvu ngemivimbo enemibala kunye nepomppon enkulu.
I-kepi efudumele kunye noboya obunzima njengabalingisi bezemidlalo. Banobuchule bombala obunqandekileyo kunye ne-minimalism, njengentloko yabesifazane abasuka kuDsquared2, iDKNY, eCusto Barcelona.
Iinqanaba ezininzi-brimmed yindlela yokuNyaka ka-2015-2016. Abaqulunqi beFashion banikela ukuba bawagqoke kunye neengubo ezivuthayo kunye neebhoti eziphezulu. Eli jongene nesitayela sentshonalanga enesibindi kunye nabasetyhini abaselula.
Iintloko zokubhinqa zasebusika zakwa-2015-2016
Eyona nto ixhaphakileyo kwiindawo zethu zokusasa iinjengezikazi zeeshati. Kulo nyaka, imfashini iya kuba yintsimbi eyenziwa ngobumnini bemvelo. Ngokomzekelo, imizekelo evela kwi-fox, i-fox ebomvu, i-raccoon yanikelwa nguFendi, Preen, Dolce & amp; Gabbana, Missoni. Ngokuphathelele izitayela, abaqulunqi bavakalisa ukucinga kwabo. Ngokomzekelo, i-Daks ibonisa ukuba abafazi banxiba isitya esikhulu seboya, bakhumbuza i-Headgear ye-Majesty Elizabeth II. UDerek Lamvernul kwiifashthi ze-three-dimensional caps nge-earflaps. Uphawu lweSimetetta Ravizza lubonise inwele enhle kakhulu yeenwele ze-shade ezikhanyayo, ubuyisela imfashini kwimifanekiso yesetyhini.
Inguqu engaqhelekanga yamashishini afudumele angabonwa kwisithombe esivela kwi-Emporio Armani. Iimbophu-izitya zizonwaba ngenxa yobukhulu becala kwaye zihlanganiswe ngokugqibeleleyo kunye neengubo ezigqithisileyo zangelo xesha.
I-Dolce neGabbana banikela ngamabhinqa kule busika bazive njengabancinci bamasempuma, kwaye bembethe iingubo kunye neengubo, zihlotswe ngamatye. Ngokubhekiselele kwisisombululo sombala, kule busika abaqulunqi benza iibhentshi kwiimpawu zendalo. Phantse zonke izitayela zeethiya zenziwa kwisikimu sombala ovalwe. Izindlela eziphambili: abamnyama, abamnyama, abamhlophe, abomdaka. Ukungafani kwakukhopi ekhanyayo, ukuxelisa isikhumba senyoka, ukusuka kwi-Dsquared2 kunye neebhanki ezininzi ezivela kwiTommy Hilfiger.
Ukugqoka okumhlophe kwe-2014
Nguwuphi umkhwa wokukhetha intombazana?
Isidlo sobonke kwiimeko zonke: i-mushroom sauce ezivela kumagqabi
Umtshato kaNikita Presnyakov noAlena Krasnova: Iifoto eziqhakazileyo ezingama-20 kunye neevidiyo eziyingqayizivele
Yiyiphi na yokuqala yamava ezesondo?
Ngaphandle kokuboleka umntwana: ukuqina kwezingane kunye nesisigqi
Iingxaki zesondo zesibini esitshatileyo
Iyintoni inkqubo yokuhlaziywa kweeseli zesikhumba?
Iibhisikidi ezine-nutmeg ne-maple isiraphu
I-Horoscope ye-Capricorn-abafazi ngoJanuwari 2017
I-Horoscope yeNtombikazikazi ngo-Agasti 2016
Izibonelelo kunye nenzakalo yetshokolethi
Ukuthandwa kwentloko yamantombazana